Weekly Esports Program (June 28th to July 4th) – Gaming Noodle
တစ်ပတ်တာ Esports အစီအစဉ်များ (ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်)
Weekly Esports Program ကို ပြည်တွင်းပြည်ပမှာ ကျင်းပနေတဲ့ တစ်ပါတ်တာ (ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်) အတွင်း ဂိမ်းပြိုင်ပွဲတွေကို ကြည့်ရှုအားပေး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စေရန်အတွက် သောကြာနေ့တိုင်း တင်ဆက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ပါတ်အသစ်ပါဝင်လာတဲ့ ပြိုင်ပွဲကတော့ Ducky Esports က ကျင်းပတဲ့ Ducky Dota2 Championship Season (1) ပြိုင်ပွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင် ၇ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပပြီး ဆုကြေးငွေ (၄) သ်ိန်းအထိပေးအပ်မယ့် ဒီပြိုင်ပွဲကို အောက်ပါ link မှာ register နိုင်ပါတယ်။
အရင်အပါတ်တွေမှာ ကြေညာပေးခဲ့တဲ့ Bloodlustz ရဲ့ Amature ပြိုင်ပွဲကတော့ Main Event ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် ၄ သင်းကို ရွေးချယ်ပြီးခဲ့ပါပြီ။ ထိုပြိုင်ပွဲကိုတော့ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ Myanmar Convention Center မှာ Galaxy World Culture Festival နဲ့အတူ ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ Cosplay တွေအပြင် အခြား Entertainment တွေပါ ပါဝင်ဦးမှာမလို့ စိတ်ဝင်စားသူများအနေနဲ့ အောက်ပါ link မှာ ticket များ မေးမြန်း ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
မန္တလေးမှာပြုလုပ်နေတဲ့ Mandalay University Esports Tournament ကတော့ ဆုကြေး သိန်း ၄၀ အထိပေးအပ်မယ့် တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံ Dota2 ပြိုင်ပွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Closed Qualifier အဆင့်ကိုတော့ ၁၆ သင်းရောက်ရှိနေပြီး အဲဒီအထဲက ၇ သင်းကသာ မနှစ်က ချန်ပီယံ MUFL အသင်းနဲ့တူတူ Main Event မှာ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာပါ။ ပြိုင်ပွဲတွေကိုတော့ Speed Gaming Esports Broadcasting Facebook Page မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်
Wallet Code ရဲ့ MLBB ပြိုင်ပွဲ ကတော့ဆုကြေးငွေ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ တစ်ထောင်နဲ့ Diamomd 12,500 အထိပေးအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အသင်း အရေအတွက် ၁၆ သင်းသာ လက်ခံမှာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲကို ၂၉ ရက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီ ရွှေဂုံတိုင်ရှိ Misfit Cafe မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Gaming Noodle မှ Media Partner အဖြစ် ပါဝင်အားဖြည့်ထားတဲ့ Samung Galaxy Challenge PUBG Mobile Tournament ဟာတော့ Group Stage ကိုကျော်လွန်ပြီး Semi-final အဆင့်ကို ရောက်ရှိလာပါပြီ။ Semi Final Group B နဲ့ C ကိုတော့ဇွန်လ ၂၉ ရက်နဲ့ ၃၀ ရက်နေ့ညနေ ၅ နာရီက စတင်ပြီး ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုကြေး သိန်း ၁၀၀ အထိပေးမယ့် ဒီပြိုင်ပွဲကိုတော့ Gaming Noodle page မှာ တိုက်ရိုက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Dota Pro Circuit ရဲ့ နောက်ဆုံး Major Epicenter ရဲ့ Main Event ကိုတော့ ယနေ့ (၂၈ ရက်နေ့) မှာ စတင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Playoff အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီး အသင်း ၈ သင်းသာကျန်ရှိပါတော့တယ်။
Team Liquid ရဲ့ Roster အသစ် ဘယ်လောက်ထိ လုပ်ပြနိုင်မှာလည်း? လူမစုံတဲ့ OG ကရော အသက်ဆက်နိုင်ပါဦးမလား? Gaming Noodle က ကိုဘူးရဲ့ သုံးသပ်ချက်ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုပြီး ဘယ်လေညက်ထိမှန်နေသေးတယ်ဆိုတာ တိုက်ကြည့်ကြရအောင်။
EPICENTER Major အား ကြိုတင်ခံစားခြင်း
HLTV Ranking ထိပ်ဆုံး ၁၀ သင်းထဲက ၉ သင်းပါဝင်မယ့် CSGO ပွဲကတော့ဒီတစ်ပါတ်ရဲ့ International Tournament of the week ပါ။
ဇူလိုင် ၂ ရက်ကနေ ၇ ရက်အထိကျင်းပမယ့် ESL ONE Cologne 2019 ကတော့ ဆုကြေး ဒေါ်လာ ၃၀၀,၀၀၀ အထိပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တဈပတျတာ Esports အစီအစဉျမြား (ဇှနျလ ၂၈ ရကျနမှေ့ ဇူလိုငျလ ၄ ရကျ)
Weekly Esports Program ကို ပွညျတှငျးပွညျပမှာ ကငျြးပနတေဲ့ တဈပါတျတာ (ဇှနျလ ၂၈ ရကျနမှေ့ ဇူလိုငျလ ၄ ရကျ) အတှငျး ဂိမျးပွိုငျပှဲတှကေို ကွညျ့ရှုအားပေး ယှဉျပွိုငျနိုငျစရေနျအတှကျ သောကွာနတေို့ငျး တငျဆကျသှားမှာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီတဈပါတျအသဈပါဝငျလာတဲ့ ပွိုငျပှဲကတော့ Ducky Esports က ကငျြးပတဲ့ Ducky Dota2 Championship Season (1) ပွိုငျပှဲပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဇူလိုငျ ၇ ရကျနမှေ့ာ ကငျြးပပွီး ဆုကွေးငှေ (၄) သိနျးအထိပေးအပျမယျ့ ဒီပွိုငျပှဲကို အောကျပါ link မှာ register နိုငျပါတယျ။
အရငျအပါတျတှမှော ကွညောပေးခဲ့တဲ့ Bloodlustz ရဲ့ Amature ပွိုငျပှဲကတော့ Main Event ယှဉျပွိုငျရမယျ့ ၄ သငျးကို ရှေးခယျြပွီးခဲ့ပါပွီ။ ထိုပွိုငျပှဲကိုတော့ ဇှနျလ ၃၀ ရကျနေ့ Myanmar Convention Center မှာ Galaxy World Culture Festival နဲ့အတူ ကငျြးပမှာဖွဈပါတယျ။ Cosplay တှအေပွငျ အခွား Entertainment တှပေါ ပါဝငျဦးမှာမလို့ စိတျဝငျစားသူမြားအနနေဲ့ အောကျပါ link မှာ ticket မြား မေးမွနျး ဝယျယူနိုငျပါတယျ။
မန်တလေးမှာပွုလုပျနတေဲ့ Mandalay University Esports Tournament ကတော့ ဆုကွေး သိနျး ၄၀ အထိပေးအပျမယျ့ တက်ကသိုလျပေါငျးစုံ Dota2 ပွိုငျပှဲပဲ ဖွဈပါတယျ။ Closed Qualifier အဆငျ့ကိုတော့ ၁၆ သငျးရောကျရှိနပွေီး အဲဒီအထဲက ၇ သငျးကသာ မနှဈက ခနျြပီယံ MUFL အသငျးနဲ့တူတူ Main Event မှာ ယှဉျပွိုငျရမှာပါ။ ပွိုငျပှဲတှကေိုတော့ Speed Gaming Esports Broadcasting Facebook Page မှာ ကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ
Wallet Code ရဲ့ MLBB ပွိုငျပှဲ ကတော့ဆုကွေးငှေ စုစုပေါငျး ဒျေါလာ တဈထောငျနဲ့ Diamomd 12,500 အထိပေးအပျမှာဖွဈပါတယျ။ အသငျး အရအေတှကျ ၁၆ သငျးသာ လကျခံမှာဖွဈပွီး ပွိုငျပှဲကို ၂၉ ရကျနေ့ မနကျ ၁၀ နာရီ ရှဂေုံတိုငျရှိ Misfit Cafe မှာကငျြးပမှာဖွဈပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ Gaming Noodle မှ Media Partner အဖွဈ ပါဝငျအားဖွညျ့ထားတဲ့ Samung Galaxy Challenge PUBG Mobile Tournament ဟာတော့ Group Stage ကိုကြျောလှနျပွီး Semi-final အဆငျ့ကို ရောကျရှိလာပါပွီ။ Semi Final Group B နဲ့ C ကိုတော့ဇှနျလ ၂၉ ရကျနဲ့ ၃၀ ရကျနညေ့နေ ၅ နာရီက စတငျပွီး ကငျြးပသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဆုကွေး သိနျး ၁၀၀ အထိပေးမယျ့ ဒီပွိုငျပှဲကိုတော့ Gaming Noodle page မှာ တိုကျရိုကျ ကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ။
Dota Pro Circuit ရဲ့ နောကျဆုံး Major Epicenter ရဲ့ Main Event ကိုတော့ ယနေ့ (၂၈ ရကျနေ့) မှာ စတငျကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ။
Playoff အဆငျ့ကိုရောကျရှိနပွေီး အသငျး ၈ သငျးသာကနျြရှိပါတော့တယျ။
Team Liquid ရဲ့ Roster အသဈ ဘယျလောကျထိ လုပျပွနိုငျမှာလညျး? လူမစုံတဲ့ OG ကရော အသကျဆကျနိုငျပါဦးမလား? Gaming Noodle က ကိုဘူးရဲ့ သုံးသပျခကျြကို ပွနျလညျ ဖတျရှုပွီး ဘယျလညေကျထိမှနျနသေေးတယျဆိုတာ တိုကျကွညျ့ကွရအောငျ။
HLTV Ranking ထိပျဆုံး ၁၀ သငျးထဲက ၉ သငျးပါဝငျမယျ့ CSGO ပှဲကတော့ဒီတဈပါတျရဲ့ International Tournament of the week ပါ။
ဇူလိုငျ ၂ ရကျကနေ ၇ ရကျအထိကငျြးပမယျ့ ESL ONE Cologne 2019 ကတော့ ဆုကွေး ဒျေါလာ ၃၀၀,၀၀၀ အထိပေးအပျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။